Circle Relax: Puzzles isan'andro Art Puzzle&Hack – Torohevitra Android Cheats
ny admin | Novambra 28, 2021
Ny piozila sakana amin'ny Circle Relax dia manome piozila slider mahazatra tsotra sy mampiankin-doha. Tsindrio na asio ny taila mba hamahana ny piozila. Milalao mampiasa ny sary tsara tarehy nosy tropikaly namboarina, na mamorona piozila tsy misy fetra. Haingana no ahafahanao mamita ny lalao?
Ny endri-javatra Circle Relax:
• Fameram-potoana lalao sy manetsika statistika mifanohitra handrefesana ny fivoaran'ny fahaiza-manao.
• Havaozina isan'andro ny galeria piozila maimaim-poana!
• Mihoatra ny 1000 piozila avo lenta tsara tarehy!
• Fonosana piozila vaovao misy sanganasa tsy manam-paharoa nataon'ny mpanao hosodoko!
• Fiatoana fiatoana anaty lalao.
• Ambaratonga fahasahiranana maro.
• Manaova piozila mihoatra ny iray isaky ny mandeha ary jereo ny fandrosoanao!
• Avereno jerena ny sarin-kanto efa vita mba hanampiana anao hamaha izany!
• Mikoriana moramora sy haingana eo amin'ny toerany ny taila.
• Fihodinana fomba ho an'ny tena jigsaw piozila matihanina! Afindrano vondrona!
• Fanangonana mozika lehibe: safidio ny mozika ampiarahina amin'ny sainao!
• Ny fanaraha-maso tsotra dia manamora ny famahana piozila!
Ary misy endri-javatra maro hafa ho hita! Afaka mamorona piozila tsy manam-paharoa ianao! Ankoatra izany, azonao atao ny misafidy ny mozika tianao indrindra amin'ny fanangonana mozika amin'ny lalao mba hiaraka amin'ny fialan-tsasatrao, sarin-javakanto manala adin-tsaina!
Ao amin'ny Circle Relax dia afaka mivezivezy eran'izao tontolo izao ianao, jereo ny tany mijoalajoala, hiaina ny fizaran-taona sy ny zava-mahatalanjona eran-tany, rehetra avy amin'ny fiadanana sy ny fahanginana ao an-tranonao.
Namorona ity fampiharana ity ho anao izahay mba hahafahanao milalao ny lalao tianao indrindra na aiza na aiza sy amin'ny fotoana rehetra. Izany tanteraka simulates ny tena maimaim-poana jigsaw piozila sy, mandritra izany fotoana izany, Ny fampiharana dia mampiasa ny tombony rehetra ananany mba hahatonga ny filalaovana ny lalao tianao ho mora araka izay azo atao.
← Poppy Playtime Huggy Wuggy – mangalatra&Hack Mahantra Menarana: Afaka manampy azy Cheats&Hack →
Tic Tac Toe 2 Mpilalao:Glow XOXO Cheats&Hack
Bubble Stass – voice​ – mangalatra&Hack